के हो सोलार मिनिमम ? सुर्यको शक्ति कम भएकै हो ? - nepnews
के हो सोलार मिनिमम ? सुर्यको शक्ति कम भएकै हो ?
हाम्रो सौर्य मण्डलमा सुर्य केन्द्रमा छ र ग्रहहरु त्यसैको वरिपरी परिक्रमा गर्दछन् । पछिल्लो अध्ययनले अहिलेको समयमा सुर्य कम सक्रिय भएको देखाएको छ । जसलाई बैज्ञानिकहरु सोलार मिनिमम भन्दछन् । के हो सोलार मिनिमम र यसले पृथ्बीमा के असर गर्दछ ?
हामीले प्राप्त गर्ने तापको श्रोत सुर्य हो र यसैले हाम्रो दैनिक तालिकाको समेत निर्धारण गर्दै आएको छ । पृथ्वी जस्तै सुर्यको पनि आयु हुन्छ । यसमा पनि परिवर्तनहरु हुँदै आएका छन् । कुनै बेला सुर्य बढी सक्रिय हुन्छ र कुनै बेला कम ।
सुर्य कम सक्रिय भएको अवस्थालाई बैज्ञानिकले सोलार मिनिमम भनेका छन् । प्रत्यक एघार वर्षको अन्तरालमा सुर्यको शक्तिमा परिवर्तन हुँदै आएको नासाका बैज्ञानिकले बताएका छन् । सुर्य बढी सक्रिय भएको अवस्था जसलाई बैज्ञानिकले सोलार म्याक्सिमम पनि भनेका छन्, यो बेला सुर्यको शक्ति उच्च विन्दुमा पुग्छ । र, यो बेला सौर्य छालहरु पनि सक्रिय हुन्छ । तर, अहिले सुर्य शान्त भएको छ । यसको अर्थ सौर्य छालमा कमी आएको छ र सुर्यको शक्ति पनि तुलनात्मक न्यून भएको छ ।
नासाका अनुशार अहिले सुर्यको शक्ति पछिल्लो तीन सय वर्ष यताकै न्यून भएको छ । सन् १६५० देखि १७१५ सम्म चलेको सोलार मिनिममले पृथ्वीको उत्तरी गोलार्धमा निकै चिसो भएको थियो । ब्यापक हिमपात पनि भएको थियो । जुन समयलाई लिटिल आइस एज अर्थात सानो हिम युग भनिएको छ ।
तर, यो पटकको सोलार मिनिमममा हिम युग भने नआउने बैज्ञानिकले स्पष्ट पारेका छन् ।
ग्रीन हाउस ग्यास र जिवास्म इन्धनको चरम प्रयोगका कारण त्यसबेलाको जस्तो चिसो पृथ्वी बासीले अनुभव गर्नेछैनन् ।
सन् २०१४ मा सुर्य सबैभन्दा बढी सक्रिय रहेको र सन् २०१९ देखि न्यून सक्रिय हुन थालेको नासाले रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ ।
ब्रम्मान्डको मौसममा पनि सुर्यको भूमिका महत्वपूर्ण छ । यसले विभिन्न किरणहरु सौर्य मण्डलमा छोड्ने गरेको छ । तापक्रममा कम सक्रिय भएपनि अरु अवस्थामा भने सुर्य निरन्तर सक्रिय रहन्छ ।
सुर्यले पराबैरंगी किरण भने लगातार छोड्छ । यो बेला सुर्यको गुरुत्वाकर्षणमा समेत कमी आउँछ । जसले गर्दा मानिसका लागि खराब मानिएका किरणहरु पृथ्वीको बायुमण्डलको माथिल्लो भागसम्म आइपुग्ने बैज्ञानिकको अध्ययनले देखाएको छ । सौर्य छालबाट उत्पादन हुने यी किरणले संचार र जीपीएस प्रणालीमा समेत ठूलो असर पर्नेछ ।
यस्तो अवस्था सन् २०२५ सम्म कायम रहने नासाले जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको नयाँ नक्सा आज सार्वजनिक हुँदै
अतिक्रमित भूमि समावेश गरेको नक्सा सार्वजनिक, सबैलाई नयाँ नक्सा प्रयोग गर्न अपील
भाजपाका पूर्व बिधायकलाई बलात्कार मुद्दामा जन्मकैद
एपस्टिन प्रकरणका कारण वेलायती राजकुमार राजकीय दायित्वबाट पछि हट्ने
Nepnews November 22, 2019
बिर्तामोडका सुन व्यवसायी साजनको हत्यामा संलग्न थप दुई पक्राउ
Nepnews April 17, 2018
पत्रकार अर्जुन गिरी सामान्य तारेखमा रिहा
Nepnews April 18, 2019
दशैंका लागि नयाँ नोट असोज १० गतेदेखि साट्न पाइने
Nepnews September 18, 2019
भारतीय जनता पार्टीका निर्वाचित नेताले बलात्कार गरेको ठहर